Shwe Nya War Sayadaw: August 2012
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ သြဂုတ် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂
စက်တင်ဘာ ၁၊ နယူးယောက်မြို့တော်၊ ၀င်းရွှေဝါခန်းမ၊ ၇၃ လမ်း၊ Woodside , NYC. ညနေ ၆ နာရီမှ ၉ နာရီ
စက်တင်ဘာ ၂၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ အယ်ဘနီမြို့၊ ဓမ္မ၀ါဒီအောင်မြေမင်္ဂလာကျောင်း၊ ညနေ ၆ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ
စက်တင်ဘာ ၈၊ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့၊ ဇေတ၀န်ကျောင်း၊ နေ့ခင်း ၁ နာရီမှ ၃ နာရီ အထိ
စက်တင်ဘာ ၉ ၊ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့၊ သုခကံသာကျောင်းသစ်တက်ပွဲ၊ နေ့ခင်း ၁ နာရီ ၊
ရွှေည၀ါဆရာတော်နှင့် ဒယ်အိုးဆရာတော်တို့ ၂ပါး၏ တရားပွဲ
စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ မင်္ဂလာရာမကျောင်းတိုက်၊ ညနေ ၅ နာရီ မှ ၈ နာရီ အထိ
Posted by Maung Yit at 12:01 AM No comments:
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ မြင့်မိုရ်ဦး၊ သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၂
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဓမ္မခရီးစဉ်လှည့်လည်နေတဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟရဲ့ တရားပွဲတပွဲကို နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ယူတိကာပြည်၊ သန္တိသုခကျောင်းတိုက်မှာ သြဂုတ် ၂၆ ညနေခင်းက အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တရားခေါင်းစဉ်ကတော့ “ငါးပါးမမှောက်စေနဲ့” ဖြစ်တယ်လို့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးပညာနန္ဒက မုိုးမခကို ပြောကြားပါတယ်။
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ လောအယ်စုိုး၊ သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၂
ဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာမိသားစုများ အားလုံး စုပေါင်းကျင်းပကြတဲ့ ပထမဦးဆုံးသော တရားပွဲ ဓမ္မသဘင်ဖြစ်တယ်လို့ ဇေယျသီရကျောင်းက ဆရာတော် ဦးခေမိန္ဒာစာရက မိုးမခကို ပြောကြားပါတယ်။ ဟောကြားတဲ့ တရားခေါင်းစဉ်က ဘုရားဟောတဲ့ညီညွတ်ရေး တရားလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆရာတော်ကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားကွန်မြူနီတီက ထီးဖြူမိုး ပြီး လှည့်လည်ကြိုဆိုကြတာကို ကြည်နူးဝမ်းမြောက်ဖွယ်တွေ့ရပါတယ်။
ဆရာတော် သာဓုကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားခံပြီးနောက် မှော်ဘီမှာ ပြောင်းရွှေ့သီတင်းသုံးနေတဲ့ မှော်ဘီစာသင်ကျောင်းတိုက်ကြီး ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားတွေက လှူဒါန်းကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
Posted by Maung Yit at 8:55 PM No comments:
ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ ဒေလီစီးတီးတရားပွဲ ရုပ်သံမှတ်တမ်း (19th August 2012)
မိုးမခရုပ်သံ၊ ဓာတ်ပုံ ကိုကျော်နိုင်၊ သြဂုတ် ၂၅၊ ၂၀၁၂
Labels: Dhamma Talk, Video Archives
မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ သြဂုတ် ၁၉ ၊ ၂၀၁၂
ဇူလိုင် လကုန်ပတ်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ဓမ္မခရီးစဉ်ရောက်ရှိနေတဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟရဲ့ တရားပွဲခရီးစဉ်တွေ အနက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အရှေ့ခြမ်းပြည်နယ်တွေကို ကြွရောက်မယ့်အထဲက နယူးယောက်ပြည်နယ်က မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာ ဘတ်ဖဲလိုးမြို့နဲ့ ယူတီကာမြို့နယ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှာ တရားပွဲများ ကျင်းပဖြစ်မယ် ဆိုပါတယ်။
အစီအစဉ်များကို အောက်ပါအတိုင်း ထွက်ရှိလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဘတ်ဖဲလိုးမြို့၊ သြဂုတ် ၂၅၊ ညနေ ၆ နာရီ တရားပွဲ
ကိုမြင့်ထွေး (၇၁၆)၃၅၉ ၄၁၅၆
ကိုလှစိုး (၇၁၆)၄၄၆ ၆၄၂၆
ကိုသန်းစိုး (၇၁၆)၅၁၀ ၁၆၀၈
ယူတီကာမြို့၊ သြဂုတ် ၂၆၊ ညနေ ၆ နာရီ တရားပွဲ
အရှင်ပညာနန္ဒ၊္ဒ(၃၁၅)၇၃၂-၅၆၃၆။ (၃၁၅)၂၇၂-၅၄၆၇
Posted by Maung Yit at 9:32 PM No comments:
Labels: In the News, Invitation
Dhamma Talk Invitation - Daly City - 19th August 2012
Posted by Maung Yit at 3:39 PM No comments:
မိုးမခရုပ်သံ၊ ကိုကျော်နိုင်၊ သြဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၁၂
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ ဖရီးမောင့်မြို့၊ စင်တာဗီးလ်ရိပ်သာမှာ မြန်မာပြည်က ခေတ္တကြွရောက်လာတဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်ဦးပညာသီဟရဲ့ တရားပွဲကို ဧည့်ပရိသတ် ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။
ဘေးဧရိယာအနောက်ခြမ်း၊ ဆန်ဖရန်နဲ့ ဒေးလီစီးတီးမြို့တော်များက ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက် ထေရ၀ါဒဓမ္မအသင်း က ဒေးလီစီးတီးရှိ ဆရီမွန်တီအသင်းခန်းမမှာ တရားပွဲကို လာမယ့် သြဂုတ် ၁၉၊ ဆန်းဒေးမှာ ကျင်းပမယ်လို့သိရသည်။
(ဓာတ်ပုံ - ကိုဂျေစင်) (ရုပ်သံ - ကိုကျော်နိုင်)
Posted by Maung Yit at 3:56 PM No comments:
မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂
လက်ခံရရှိသော အချက်အလက်များအရ ယခုလဆန်းမှ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာသို့ ခရီးကြွချီလာသော ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟသည် အောက်ပါ ခရီးစဉ်အတိုင်း ပြည်နယ်များသို့ ကြွရောက်ပြီး တရားပွဲများ လက်ခံချီးမြှင့် ပေးမည်ဟု သိရသည်။
၁၂ သြဂုတ် တွင် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ ဖရီးမောင့်မြို့၊ စင်တာဗီးလ် ကွန်မြူနီတီရိပ်သာ
၁၉ သြဂုတ် တွင် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ ဒေလီစီးတီး ထေရ၀ါဒဓမ္မအသင်း (http://tdsusa.blogspot.com/ )
၂၅၊ သြဂုတ် တွင် နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ဘတ်ဖဲလိုးမြို့ ၊ ဆက်သွယ်ရန် - ကိုမင်းနိုင် ၇၁၆ ၅၄၄ ၁၁၇၂
ကျင်းပမည့်ရက်--သြဂုတ်လ၊၂၆၊ ၂၀၁၂(တနင်္ဂနွေနေ့)။ ကျင်းပမည့်အချိန်--ညနေ(၆)နာရီ/ ကျင်းပမည့်နေရာ--သန္တိသုခကျောင်းတိုက်။ 1005 Miller St, Utica, NY13501. ဆက်သွယ်ရန်-အရှင်ပညာနန္ဒ (၃၁၅) ၇၃၂-၅၆၃၆။ (၃၁၅)၂၇၂-၅၄၆၇
၁၊ ၂ စက်တင်ဘာတွင် နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ နယူးယောက်မြို့တော်၊ ဆက်သွယ်ရန် - ကိုရဲထွဋ် ၃၄၇ ၂၂၆ ၀၅၇၂
၈၊ ၉ စက်တင်ဘာတွင် အင်ဒီယာနာပြည်နယ်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့၊ ဇေတ၀န်ကျောင်းတိုက်၊ ဆက်သွယ်ရန် ၂၆၀ ၅၈၀ ၂၁၃၃
၁၅၊ ၁၆ စက်တင်ဘာတွင် ၀ါရှင်တန် ဒီစီ၊ ဆက်သွယ်ရန် ကိုယဉ်ထွေး၊ ကိုဇော်ဇော် ၂၀၂ ၃၇၅ ၃၃၉၀
၂၂၊ ၂၃ စက်တင်ဘာ၊ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၊ ဆက်သွယ်ရန် - ကိုအောင်သန်း ၉၁၉ ၂၄၀ ၉၃၈၃
၂၉၊ ၃၀ စက်တင်ဘာ၊ အိုရီဂွန်ပြည်နယ်၊ ဆီယယ်တဲမြို့၊ ကိုဇေယျာကျော် ၂၀၆ ၈၅၀ ၃၈၁၈
လက်ရှိတွင် တရားပွဲစဉ်များကို ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာရှိ ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖြစ်သော ကိုရန်အောင် ( 510-610-9758) ကိုမောင်မောင်သိန်း ( 415-680-8806) သို့ ဆက်သွယ်ပြီး စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာတော်က နိုဝင်ဘာ လဆန်း ပထမပတ်မှာ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်ကြွမည် ဖြစ်ပါတယ်။ http://shwenyawa.blogspot.com သို့ သွားရောက်ပြီး ဆရာတော့်တရားမှတ်တမ်းများ လှုပ်ရှားမှုများကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Maung Yit at 8:47 PM No comments:
ပီနိုး၊ ကေတုမတီဓမ္မာရုံ၊ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ တရားဟောပြောချက်
ပီနိုး၊ ကေတုမတီဓမ္မာရုံ၊ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ တရားဟောပြောချက် (သာသနာနဲ့ ဒါယကာ)
မိုးမခရုပ်သံ၊ သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၁၂
ရွှေည၀ါဆရာတော် တက်ရောက်ပြီး သြ၀ါဒစကားပြောကြား
မိုးမခရုပ်သံ၊ သြဂုတ် ၉ ၊ ၂၀၁၂
Posted by Maung Yit at 10:01 AM No comments:
Labels: In the News, Video Archives
ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ ၈၈-၂၄နှစ်ပြည့် ဥက္ကလံမြို့တွင် ဟောကြားသည့် “ ပေဖူးလွှာ” တရား ရုပ်သံ
မိုးမခရုပ်သံ၊ သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၂
သြဂုတ် ၄၊ စနေနနေ့က ဥက္ကလံမြန်မာမိသားစုများ စုဝေးပြုလုပ်တဲ့ ၈၈ အရေးတော်ပုံ ၂၄ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကျွေးတရားနာ အခမ်းအနားမှာ ရွှေည၀ါဆရာတော်ဘုရား၏ “ပေဖူးလွှာ” တရားဟောပြောချက် အပြည့်အစုံကို ရုပ်သံအဖြစ် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုကျော်နိုင်ရဲ့ ရိုက်ကူးပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maung Yit at 10:08 PM No comments:
12th August 2012, Sunday - Fremont's Centerville - Dhamma Talk
လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ဖရီးမောင့်မြို့၊ စင်တာဗီးလ် ကွန်မြူနီတီစင်တာမှာ ညနေ ၃ နာရီက ၆ နာရီအထိ ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟ၏ တရားပွဲ “လူသာသေ၊ နံမယ်မသေစေနဲ့” ကျင်းပမှာဖြစ်လို့ အားလုံးကို ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ထေရုပ္ဗတ္တိကိုလည်း ပူးတွဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တရားပွဲမှာ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကို အဟာရဒါနလှူဒါန်းမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (Design - Ko Win Hlaing)
Posted by Maung Yit at 4:25 PM No comments:
Oakland Burmese Community to host 88-24 year
မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ သြဂုတ် ၂၊ ၂၀၁၂
လာမယ့်စနေ သြဂုတ်လ ၄ ရက်၊ ဥက္ကလံမြို့ ဓမ္မဧရိပ်ကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖိတ်စာပို့ထားပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်ကို ဖိတ်ကြားပြီး ဆွမ်းကပ် တရားနာပြုလုပ်ကြမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Posted by Maung Yit at 8:39 PM No comments:
ဥက္ကလံမြို့၊ ဓမ္မဧရိပ်ကျောင်း၊ ပထမဦးဆုံး အမေရိကန်ပြည်ပွဲဦးထွက် တရားပွဲ - ကိုးကွယ်ရာ မမှားကြစေနဲ့ တရားတော် (ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၂)
ဥက္ကလံမြို့၊ ဓမ္မဧရိပ်ကျောင်းတွင် ပထမဦးဆုံး အမေရိကန်ပြည်ပွဲဦးထွက် တရားပွဲ (ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၂)
(ကိုးကွယ်ရာ မမှားကြစေဖို့ တရားတော်)
http://shwenyawa.blogspot.com မှာလည်း တစုတစည်းတည်း တင်ဆက်ထားပါသည်။
Posted by Maung Yit at 3:18 PM No comments:
နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ယူတီကာမြို့ ရွှေည၀ါဆရာတော်တရားပွဲ...
နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ဘတ်ဖဲလိုးမြို့ ရွှေည၀ါဆရာတော် တရ...
ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ ဒေလီစီးတီးတရားပွဲ ရုပ်သံမှတ်တမ်း (...
ရွှေည၀ါတရားပွဲ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ဘတ်ဖဲလိုးနဲ့ ယူတီ...
Dhamma Talk Invitation - Daly City - 19th August 2...
ရွှေည၀ါဆရာတော် ဖရီးမောင့်တရားပွဲ - လူသာသေ၊ နံမယ်မသေ...
ပီနိုး၊ ကေတုမတီဓမ္မာရုံ၊ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ တရားေ...
၈လေးလုံး ၂၄နှစ် ဘားမားဒေး အလံတင်အခမ်းအနား၊ ဘာကလြေ...
ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ ၈၈-၂၄နှစ်ပြည့် ဥက္ကလံမြို့တွင် ဟောကြ...
12th August 2012, Sunday - Fremont's Centerville -...
ဥက္ကလံမြို့၊ ဓမ္မဧရိပ်ကျောင်း၊ ပထမဦးဆုံး အမေရိကန်ပြည...